“Digniin”shidaalka bada ha la joojiyo qodidiisa. |
“Digniin”shidaalka bada ha la joojiyo qodidiisa.
Prof. Ahmed M Warfa1
“Waxa Laga Joogaa 100 Sano?”
Waa muddo fog, waa Soomaaliya, waxa laga hadlaa Soomaali, waxa ka hadlaa Sayid Maxamad Cabdulle Xassan oo nagu sifeeyey in aan nahay saaxibul “musuq.” Geed dhecaan kiisa ayuu dhalaa oo waa taas xattaa dowladihii Soomaaliyeed oo is kig-xigay kala saari waayeen musuqii iyo dowlad wanaaggii.
Waxay taladii dhaafi weysey in ku guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha shacabka oo shaqadiisa tahay xeer dejin u bareeray in uu ka qaybqaato saami qaybsiga, kana mid yahay ragga hor boodaa hawsha wax kala wareejinta ee ka socota London. Waxa igu soo dhacday taariikhdii 1884, markii la qaybsanaayey Africa. Waxa ka sii daran in badda Soomaaliya laga raadinaa shidaal iyada oo la ogyahay 5-6 aag oo berriga ah oo hore looga helay shidaal, sida maantaba la soo geliyey warbaahinta, Alla ya cizak saaxibkay Cali Xaraare “waan ku salaamay.” Waxa loo socdaa in la sumeeyo badda, la xaalufiyo kheyraadka, marka tubooyinka dillaacaanna kharajka nadiifinta shidaalka ka bato qiimaha shidaalka oo mudda kooban keddib, Soomaaliya musallafto oo lagu kala tago sidii Venezuela, ama sida Brazil, Nigeria, Ciraq, Mexico, iwm, la xamili waayo wasakhda hawada. Ka jooga, ka jooga, oo ka jooga shidaal laga raadiyo badda ee doonta shidaalka ceegaaga berriga (Bardheere, Barawe, Garowe, iwm). “Ilaahoow marag, afeef hore ama adkaysi dambe,” Soomaaliyana guul iyo hoggaan kheyr leh, In Shaa Allaahu.
F. G. Fadlan xogta warbaahinta weriye sare “Cali Xarare” oo aan la wadaagay asxaabta messenger-ka, ha la soo geliyo barta Prof. Ahmed M. Warfa (qofkii igu dhaama farsamada), si loo wada arko waxa socda. Qofna kaama xigo carruurta Soomaaliyeed oo ah dhaxalka ee ha uga tegin sunta qarsoon oo lagu sido farqaha ogaal la’aan.